बजेट सकारात्मक रहेकाेले अब सष्टेनेवल म्यानेजमेन्टकाे मात्र खाँचाे छ: पौड्याल - Safal Awaj Safal Awaj
जेठ २९ गते २०७९ मा प्रकाशित
काठमाडाैं, १७ जेठ। नबिल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्यालले सरकारले हालै ल्याएको बजेट सबै सरोकारवालाहरुसँग सरसल्लाह गरेर, सबैको मागलाई सम्वोधन हुनेगरी सुझबुझपुर्ण तवरले ल्याएकाेले सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सफल आवाजसँग कुरा गर्दै पौड्यालले याे बजेटकाे सष्टेनेवल म्यानेजमेन्ट हुनु जरूरी रहेकाे समेत बताए ।
हामीले अर्थसँग सरोकार राख्ने सवालका बारेमा प्रि–बजेट मिटिङमा मन्त्रालय तथा अर्थका संचिवसँग छलफल गरेका थियौं । अन्य क्षेत्रबाट पनि छलफल भएका थिए । सरकारले सुझावहरु लिएको थियो । हामीले गरेको छलफलमा अर्थ सम्बन्धि निचोडका कुराहरुलाई समेटिएको पाईएकोले बजेटको यो सकारात्मक पक्ष हो उनले भने ।
यसपालिको बेजटले देशका मूलभूत समस्याहरुलाई पहिचान गरेको र त्यसका लागि के गर्ने ? भन्ने बारेमा पनि बोलेको छ । बजेट आउँदाखेरि राम्रो र नराम्रो भन्ने कुराहरु त आईहाल्छन् । यसपाली पनि त्यहि भएको छ । तर कुरा के हो भने सबै कुरा पूर्ण हुँदैनन । पौड्यालले भने, यो मात्रै त्यो हो जो हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा त्यसको प्रयोगमा कमजोरी भएको कारण, रिजल्ट नआउनुको परिणामको कारणले त्यसो भन्ने गरिएको पुरानै प्रबृत्ति हो ।
खुसिको कुरा बजेटले समस्या पहिचान र त्यसको निराकरणको लागि सम्वोधन गरेको छ । जस्तो, वित्तीय लगानीका कुरा, वातावरणको कुरा, कृषिका कुरा, पर्यटनलगायतका कुरा गर्नु राम्रो हो । बजेटमा ग्याँसको प्रयोगलाई हटाउने र इण्डक्सन चूलोको प्रयोगको कुरा गर्नु वातावरणीय हिसाबले पनि अति नै महत्वपूर्ण छ । यसका लागि बैंकहरुले पनि गाउँ गाउँसम्म जनताको क्रय शक्तिलाई सहयोग पुर्याउन लगानीको पहुँच उनीहरुसम्म पुर्याउन सक्छन् ।
अर्को कुरा नेपालको मुद्रा संचिति घटिरहेको बेलामा वैदेशिक व्यापारलाई सुधार गर्नुपर्छ । आयात ९० प्रतिशत रहेको बेलामा निर्यात १० प्रतिशत रहेकोले आयातलाई घटाउन र निर्यातमुखि उत्पादनमा जोड दिनुले धेरै महत्व राखेको छ । अध्यक्ष पौड्यालले भने, एउटा खाका तयार भएको छ कि ३० प्रतिशत आयातलाई घटाउने भन्नुको कारण अब सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ र त्यसअनुसारको बानिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ पौड्यालले भने।
मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म अब विदेशी कपडा लगाउँदिन, कम्तिमा दुई वर्षसम्म नयाँ किन्दिन, पूरानै भएपनि धोईपखालि सफा गरेर लगाउँछु किन्नै परे नेपाली नै किन्छु । अब यसरी किन नसोच्ने ? यो सांकेतिक कुरा हो तर हामी सबैले यसरी नै सघायौं भने हामीलाई, देशलाई नै फाइदा हुन्छ उनले भने।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको कुरा राम्रो हो । यसो गरे नयाँ आयातका लागि रकम पनि बाहिर जाँदैन । सरकारले नेपालको आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत राख्ने भनेको छ । यो सकिने कुरा पनि हो । ८ प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो छैन । तर यसका लागि अर्थतन्त्रका सबै फ्याक्टरहरु सबल हुनुपर्छ र फाइनान्स पनि सबल हुनुपर्छ । यो बेलामा तरलता कायम छ र तरलताको अवस्थालाइ सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वित्तीय सुधारको लागि अब हामी खुल्ला भएर आउनुपर्छ । देशको श्रोत साधनले भ्याएको छैन भने देशको अर्थतन्त्र चलाउन रकम बाहिरबाट ल्याउन सक्नुपर्छ । बैंकहरुले केहि रकम ल्याउन लागेका भए सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्छ । यदि यसो भयो भने अर्थतन्त्रमा भईरहेको तरलता अलि कम हुन्छ । उनले भने पैसा त बैंकमा आउँछ, बैध बाटोबाट आउँदा त राम्रै हुने हो नि ।
नेपालमा श्रीलंकाको हल्ला किन चलेको होला ? पौड्यालले भने, नेपाल श्रीलंकाको जस्तो बन्दैन । श्रीलंकाको क्रयशक्ति र नेपालको परिवेश फरक भएकोले यहाँ असर हुँदैन । तर भएको समस्या हल गर्न हामी तत्पर हुनुपर्छ । त्यहाँ बनेका विल्डिङ र हाईवे निर्माण वा सपिङ मलहरुले बजार बिस्तारको काम गर्न थालेपछि अर्थ मजबुत हुनसक्छ किनभने आईएनएफले बेल आउट प्याकेज दिईसकेकोले माथि आउँछ ।
हामीले भौतिक पूर्वाधारमा त्यति धेरै खर्च गरेका छैनौं । हामी त्यो डिफल्ट हुने अवश्थामा छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको लागि कृषिलाई संवोधन गरिएको छ । यसलाई हामी सबैले समातेर जानुपर्छ । कृषिको अलि कुरा गरौं सवसिटि संसारभरी छ । कुनैपनि देश सवसिटिबीना अगाडी बढेको छैन । कृषिलाई राज्यले महत्व दिएर कृषकलाई पेन्सनको पनि कुरा गरिसकेकोले सवसिटिलाई पनि महत्व दिनुपर्छ । कृषिको जोड दिनु भनेको जनता भोकै नबसुन् भन्नलाई नै हो । यि चिजहरु आयात भन्दा यहिं उत्पादनको लक्ष्य लिनु राम्रो हो ।
बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई पनि संवोधन गरेको अवस्था छ । मलाई याद आउँछ ९० को दकशमै ग्रामिण विकास बैंकले खुबै राम्रो परफरमेन्स दिएका थिए । ग्रामिण क्षेत्रमा श्रोत परिचालनको लागि महत्वपूर्ण रोल प्ले गरेका थिए । अहिले कृषिमा पनि बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् । तर सवसिटिलाई लागू गर्नुपर्छ यसले कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गर्छ । नबिल बैंकको नै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले “सस्टेनेवल बैंकिङ” भनेर गाउँ गाउँमा गएका छौं । तपाँईहरु कसरी अघि बढ्न सक्नु भएको त ? भन्ने प्रश्नमा पौड्यालले भने, यो एउटा अठोट हो, यो मेरो बैंक हो । राम्रो सँग संन्चालन गर्छु, नाफामा लैजान्छु भन्ने मोटिभेसनले काम गरेको छ । तर यत्ति मात्रै होईन अबको बैकिङ सस्टेनेवल बैंकिङ हो ।
बैंकिङ सेवा छोटो समयको लागि त होईन नि । त्यसैले हामीले दीगो बैंकिङ सेवाको कुरा गरेका हौं । अबको बैंकिङ दीगो बैंकिङ हो । लगानीलाई जहाँ पायो त्यहाँ लगानी गर्ने होईन । लगानीको क्षेत्र पहिचान भएको क्षेत्र हो अर्थात वास्तविक अर्थतन्त्रको काम गर्ने परिपाटी हो । लगानी रियल इकोनोमी रिजन नै हो ।
अहिले हामी जहाँजहाँ पुगेका छौं त्यहाँ बैंकिङ कारोबारसंगै उद्यमशिलतालाई जोड दिईरहेका छौं । म जुम्लामा गएर २०० जनालाई महिला उद्यमशिलता र दीगो बैकिङका कुराहरुको सहजिकरण गरेर आएपछि उहाँहरु आर्थिक सम्पन्नताको बाटोमा जानु भएको छ । अरुले पनि गरेका छन् के यो खुसिको कुरा होईन त ?
रियल इकोनोमिलाई बजेटले पनि भनेको छ । यो देशको आवश्यकता हो । हरेक आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु एक भएर लाग्नुपर्छ र व्यूरोक्रेसिबाट कुनै पनि प्रकारको आलटाल हुनुहुँदैन । अबको दिनमा हामी म नभई हाम्रो भनेर, सहयोग गरेर भोलि सन्ततिको लागि हेरेर काम गर्नुपर्छ । ढिलो भएको छैन तर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई हल गर्न सकिन्छ । म निकै आशावादी छु । सुझबुझकासाथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरकर्जामा लगाएको ४-१२ को मापदण्ड नियतले नराम्रो होईन । हाम्रो लगानी उत्पादनमुखी हुनुपर्यो त्यतातिर फोकस गर्नुपर्छ । सन्तुलित गरेर जान आवश्यक छ । अहिले पूँजीबजार धेरै ठूलो भईसकेको छ । त्यसको सहि व्यवस्थापन भने आवश्यक छ । निकासका लागि ब्रोकर कम्पनीहरुलाई इम्पावर गर्दै जार्नुपर्छ । हामी व्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ।
अहिले भारतमा धेरै मानिस काम गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स बाहिरबाट ल्याउन सजिलो छ भारतबाट छैन । त्यहाँबाट पैसा बैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा ल्याउन मैले नै राजदुत डा.शंकर शर्मासंग कुरा गरेको थिएँ कि कसरी पैसा बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने ? त्यहाँ रेमिटेन्स म्यानेज गर्ने बारेमा उहाँ सकारात्मक भए जस्तै जुन जुन मुलुकमा राजदुतहरु छन् र त्यहाँ हाम्रा नेपालीले काम गर्छन् उनीहरुलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा त टेवा नै पुग्छ नि ।
अहिले हामी कुनैपनि मुलुकको जस्तै उच्चस्तरको बैंकिङ सेवा नेपालबाट दिईरहेका छौं । बाहिर हुने सबैलाई आईपीओमा केहि सुविधा दिएर सहभागितालाई सहज बनाउनुपर्छ । अबैध हुण्डी कारोबार जो हुन्छ भनिएको छ यसलाई बैंकिङ सिस्टमबाट बरु दुई रुपैयाँ बढी दिएर पनि ल्याउन सके पैसा आउने ठाउँ त्यहाँ पनि छ ।
नबिल बैंकले बैंगलादेश बैक प्राप्ति गर्ने कुरा के भयो ? भन्दा पौड्यालले भने दुबै बैंकको साधारण सभाले पारित गरेको अवस्था छ । तयारी सबै पूरा भईसकेको छ । हाम्रो टार्गेट असार मसान्तसम्म छ । त्यो बेलासम्म पूरा हुन्छ । कुराको बिट मार्दै अध्यक्ष पौड्यालले भने सस्टेनेवल बैंकिङ विकासका लागि हामी सँगसँगै अघि बढौं । (वार्तामा आधारित)